DEG DEG: Itoobiya Oo Si Toos ah U sii deysay Qalbi-dhagax | Afrikada
DEG DEG: Itoobiya Oo Si Toos ah U sii deysay Qalbi-dhagax
Afrikada, Addis-Ababa: Wararka ka imaanaya wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in dowladda Itoobiya ay si toos ah u sii deysay sarkaalka ONLF ka tirsan ee lagu magacaabo C/kariin Sheekh Muuse (Qalbi-dhagax).
Ciidamada maamulka Galmudug ayaa 23-kii bishii August 2017 waxa ay howlgal ku soo qabteen C/kariin (Qalbi Dhagax), kadibna Ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ayaa waxa ay keeneen magaalada Muqdisho, iyada oo intaasi kadib lagu wareejiyay Itoobiya.
Intaas wixii ka dambeeyay waxaa jiray banaanbaxyo ay sameeyeen ehelada Qalbi-dhagax oo ku doodayay in wiilooda uusan Argagixiso aheyn, lagana been abuurtay.
Wararka ayaa sheegaya in ra’iisul wasaare Abiy Ahmed Ali uu isbedello sameeyay isaga oo la yimid siyaasad lagu sheegay in ay ku dhisan tahay furfurnaanshiyo, isaga oo ooda ka qaaday kumanaan maxaabiis ah.
READ MORE: DEG DEG: 14 Sarkaal Oo loo Xiray Qaraxyadii Muqdisho
Mid ka mid ah ehelada sarkaalkan ayaa sheegay in C/kariin (Qalbi-dhagax) uu hada yahay nin xor ah, oo magaalada meesha uu doono ka mara, wax cabsi ahna aanan qabin.